कार्यकक्षको माग गर्दै भक्तपुर बहुमुखी क्याम्पस स्ववियुद्वारा तालाबन्दी
भक्तपुर, साउन १७
स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु)ले सभापतिका लागि कार्यकक्षको माग गर्दै भक्तपुर बहुमुखी क्याम्पस प्रमुखको कार्यकक्षमा तालाबन्दी गरेका छन् ।
स्ववियू सभापतिको नेतृत्वमा गएको टोलीले क्याम्पस प्रमुख डा. कृष्णप्रसाद पोखरेललाई दुई घण्टा कार्यकक्षमा थुनेर बाहिर निकाली तालाबन्दी गरेको हो ।
गत साउन ८ गते तालाबन्दी गरेपछि क्याम्पस प्रमुख डा. पोखरेल आजसम्म पनि आफ्नो कार्यकक्षमा प्रवेश नै गर्न नपाएपछि प्रशासन कक्षमा बसेर फर्कने गरेका छन्।
क्याम्पस प्रशासनले स्ववियु सभापतिका लागि उपलब्ध गराएको कार्यकक्षमा नबसेर क्याम्पस प्रमुख बस्दै आएको कोठा नै माग गर्दा समस्या उत्पन्न भएको क्याम्पस प्रमुख पोखरेलले बताए।
उनले भने–“क्याम्पसको पुरानो भवनमा अहिलेसम्मका स्ववियु सभापतिको कक्ष रहँदै आएको छ, अहिले पनि त्यसमा स्ववियु कै कक्ष छ। अर्को चाहियो भनेर कोठा तयार पारेर दियौँ तर सभापतिले प्रमुख बसेकै कोठा चाहियो भन्नुभयो। क्याम्पसमा कोठा अभावले नयाँ भवन बनाएपछि मात्रै अरु कोठा दिउँला भनेपछि दुईघण्टा कार्यकक्ष मै थुनेर विरोध गरियो र त्यसपछि मलाई कार्यकक्षबाट निकालेर तालाबन्दी गरिएको छ ।”
यता स्ववियु सभापति दिनेश खड्गीले भने–“क्याम्पस प्रमुखको कार्यकक्षमा हामीले तालाबन्दी गरेका होइनौ, बोर्ड भने हटाएर सभापतिको कार्यकक्ष लेखेका हौ ।” क्याम्पस प्रमुखसँग स्ववियु सभापतिको कक्ष र बैठक कक्षको माग गरेको बताउँदै उनले मागको बेवास्ता गरेपछि सांकेतिक विरोध गरेको बताए। रासस
प्रकाशित मिति: मङ्गलबार, साउन १७, २०७४ ०७:३०:१२